Usarega Chero Chii Zvacho Chichikuendesa Kure naJehovha | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Zvisarudzirei nhasi wamuchashumira.”—JOSH. 24:15.
EDZA KUPINDURA MIBVUNZO IYI:
Ungaita sei kuti basa rako risakuendesa kure naJehovha?
Ungasarudza sei zvinokuvaraidza uye zvinokuzorodza zvakanaka?
Kana wemumhuri akasiya Jehovha ungaitei kuti usanyanya kurwadziwa?
1-3. (a) Nei Joshua ari muenzaniso wakanaka wemunhu akagona kusarudza muupenyu? (b) Patinenge tichisarudza zvokuita, tinofanira kuyeukei?
NYAYA yokusarudza inyaya yakakosha. Munhu anogona kusarudza chero zvaanenge achida kuita noupenyu hwake. Somuenzaniso: Fungidzira munhu ari kufamba munzira asi osvika pamharadzano. Achasarudza ipi? Kana aine kwaari kuda kusvika, zviri pachena kuti imwe yacho ichamusvitsa pedyo nekwaari kuenda asi imwe yacho ichamuendesa kure.
2 Bhaibheri rine mienzaniso yakawanda yevanhu vakasangana nemamiriro ezvinhu akadaro. Somuenzaniso, Kaini aifanira kusarudza kuita zvaienderana nehasha dzake kana kuti kuzvidzora. (Gen. 4:6, 7) Joshua aifanira kusarudza kushumira Mwari wechokwadi kana kuti kunamata vanamwari venhema. (Josh. 24:15) Chinangwa chaJoshua chaiva chokugara ari pedyo naJehovha; saka akasarudza nzira yakamuendesa pedyo naye. Kaini ainge asina chinangwa ichocho, uye akasarudza nzira yakamuendesa kure naJehovha.
3 Dzimwe nguva tinoita setasvika pamharadzano patinenge tichida kusarudza zvokuita. Kana zvikadaro, yeuka kwauri kuenda kana kuti chinangwa chako, chiya chokurumbidza Jehovha pane zvose zvaunoita uye kudzivisa chero chinhu chingakuendesa kure naye. (Verenga VaHebheru 3:12.) Munyaya ino neinotevera, tichaongorora zvinhu zvinomwe muupenyu zvatisingafaniri kurega zvichitiendesa kure naJehovha.
4. Nei kuwana zvokurarama nazvo kuchikosha?
4 VaKristu vanofanira kuzviriritira uye kuriritira mhuri dzavo. Bhaibheri rinoratidza kuti kana munhu asingadi kuriritira mhuri yake, akaipa kupfuura munhu asingatendi kana kuti anenge aramba Jehovha. (2 VaT. 3:10; 1 Tim. 5:8) Saka zviri pachena kuti basa rinokosha muupenyu, asi kana ukasangwarira, rinogona kukuendesa kure naJehovha. Zvingaitika sei?
5. Zvinhu zvipi zvinokosha zvatingafunga nezvazvo patinenge tichitsvaga basa?
5 Ngatitii uri kutsvaga basa. Kana uchigara munyika inonetsa mabasa, ungava nomuedzo wokubvuma chero basa raungawana. Zvakadini kana basa racho richipesana nezvinotaurwa neBhaibheri? Zvakadini kana basa racho richizotora nguva yaunofanira kuita zvechiKristu kana kuti richizokuendesa kure nemhuri? Unofanira kubvuma basa racho risina kukodzera here, uchiti zviri nani pane kurishaya? Yeuka kuti kusarudza kufamba nenzira isiriyo kunogona kukuendesa kure naJehovha. (VaH. 2:1) Ungave uchitsvaga basa kana kuti uchiongorora rautori naro, ungasarudza sei noungwaru?
6, 7. (a) Munhu angashanda aine chinangwa chei? (b) Chinangwa chipi chichakuswededza pedyo naJehovha uye nei?
6 Sezvambotaurwa, ramba uchifunga nezvekwauri kuenda. Zvibvunze kuti, ‘Ndinoda kuti basa iri rindisvitse kupi?’ Kana chinangwa chako chokushanda chiri chokuti uzviriritire uye uriritire mhuri yako uchishumira Jehovha, iye achakukomborera. (Mat. 6:33) Jehovha haashayi kuti okubatsira sei paunopererwa nebasa kana kuti mamiriro ezvoupfumi paanochinja. (Isa. 59:1) “Anoziva nzira yokununura nayo mumuedzo, vanhu vakazvipira kuna Mwari.”—2 Pet. 2:9.
7 Asi zvakadini kana chinangwa chako chiri chokungoda kupfuma? Zvimwe uchabudirira. Asi kunyange ukava nepfuma yacho, yeuka kuti uchakohwa. (Verenga 1 Timoti 6:9, 10.) Kuti sika sika nebasa uye kuwana pfuma kunongokuendesa kure naJehovha.
8, 9. Vabereki vanofanira kufungei pamaonero avanoita basa ravo? Tsanangura.
8 Kana uri mubereki, funga kuti muenzaniso wako unogona kubatsira kana kukanganisa sei vana vako. Vanoona uchinyanya kukoshesei, basa rako kana kuti ushamwari hwako naJehovha? Kana vakaona kuti unonyanya kukoshesa mukurumbira uye pfuma, havangatoriwo here nzira iyoyo ine ngozi? Havangazotadzi kukuremekedza here? Imwe hanzvadzi yechiduku yakati: “Kubvira ndichiri muduku, baba vangu vaigara vachingoshanda. Pakutanga zvaiita sokuti vaishanda nesimba nokuti vaida kuti mhuri yedu ive neupenyu hwakanaka. Vaida kunyatsotiriritira. Asi mumakore mashoma apfuura, zvinhu zvakachinja. Vanongoshanda vachitenga zvinhu zvoumbozha zvatinogona kurarama tisina. Saka tava kuzivikanwa semhuri ine mari panzvimbo pokuva mhuri inokurudzira vamwe pane zvokunamata. Ndaizofara kuwana rutsigiro rwababa pane zvokunamata panzvimbo pemari yavo.”
9 Vabereki, musazviendesa kure naJehovha nokuti sika sika nebasa. Ratidzai vana venyu kuti ukama naJehovha hunokosha chaizvo kupfuura pfuma.—Mat. 5:3.
10. Wechiduku angafunga nezvei paanenge achisarudza basa rokuita muupenyu?
10 Kana uri wechiduku ari kufunga nezvebasa rokuita muupenyu, ungasarudza sei rakakodzera? Sezvatokurukurwa, unofanira kuziva kuti unoda kuti upenyu hwako hunange kupi. Dzidzo uye basa zvauri kufunga zvichanyatsoita kuti utsigire Umambo here kana kuti zvichakuendesa kure naJehovha? (2 Tim. 4:10) Chinangwa chako ndechokuva sevanhu vari munyika here vanongofara chete pavanenge vaine mari yakawanda? Kana kuti ucharatidza chivimbo chaiva naDhavhidhi uyo akanyora kuti: “Ndaimbova jaya, asi zvino ndakwegura, handina kumboona munhu akarurama achisiyiwa zvachose, kana vana vake vachitsvaka zvokudya”? (Pis. 37:25) Yeuka kuti imwe nzira ichakuendesa kure naJehovha uye imwe yacho ichaita kuti uve neupenyu hwakazonaka. (Verenga Zvirevo 10:22; Maraki 3:10.) Uchasarudza nzira ipi? *
ZVINOTIVARAIDZA UYE ZVINOTIZORODZA
11. Bhaibheri rinotii nezvezvinhu zvinotivaraidza uye zvinotizorodza, asi tinofanira kuyeukei?
11 Bhaibheri harirambidzi kufara uye haritauri kuti kuwana zvinotivaraidza uye zvinotizorodza kutambisa nguva. Pauro akanyorera Timoti kuti, “Kurovedza muviri kunobatsira zvishoma.” (1 Tim. 4:8) Bhaibheri rinototaurawo kuti pane “nguva yokuseka” uye “nguva yokusvetuka-svetuka” uye rinokurudzira kuzorora zvakakwana. (Mup. 3:4; 4:6) Zvisinei, kana ukasangwarira, zvinhu zvinovaraidza uye zvinozorodza zvinogona kukuendesa kure naJehovha. Zvingadaro sei? Ngozi yacho iri pazvinhu zviviri, kuti ndezverudzii uye kuti zvichatora nguva yakawanda sei.
Zvinovaraidza zvakanaka uye zvisingatori nguva yakawandisa zvinozorodza
12. Paunosarudza zvinokuvaraidza uye zvinokuzorodza unofanira kufungei?
12 Kutanga, funga kuti ndezverudzii. Chokwadi ndechokuti zviripo zvingakuvaraidza uye zvingakuzorodza zvakanaka. Asi zvakawanda zviri munyika zvinorumbidza zvinhu zvinovengwa naMwari zvakadai sechisimba, zvemidzimu uye ufeve. Saka unofanira kuongorora kuti zvinokuvaraidza uye zvinokuzorodza ndezverudzii. Zvinokukurudzira kuitei? Zvinokukurudzira kuita zvechisimba, kukwikwidzana kana kuti kutsigira nyika yako here? (Zvir. 3:31) Zvinokupedzera mari here? Zvingagumbura vamwe here? (VaR. 14:21) Zvinoita kuti ushamwaridzane nevanhu vakaita sei? (Zvir. 13:20) Zvinoita kuti ude kuita zvakaipa here?—Jak. 1:14, 15.
13, 14. Unofanira kufungei panyaya yenguva yaunopedzera pazvinhu zvinokuvaraidza?
13 Fungawo nguva yaunopedza pazvinhu zvinokuvaraidza uye zvinokuzorodza. Zvibvunze kuti, ‘Ndinopedza nguva yakawanda pazvinhu izvozvo zvokuti ndinosara nenguva shoma yezvinhu zvokunamata here?’ Kana ukasarudza kupedza nguva yakawandisa pazvinhu zvinokuvaraidza uye zvinokuzorodza uchaona kuti nguva iyoyo haizokubatsiri sezvayaifanira kuita. Chokwadi, vaya vasingapedzi nguva yakawandisa vanotonakidzwa zvakanyanya. Nei tichidaro? Nokuti vanoziva kuti vanenge vapedza kuita “zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe,” saka havazonzwi vaine mhosva nokumbozorora.—Verenga VaFiripi 1:10, 11.
14 Kunyange zvazvo kupedzera nguva yakawandisa pazvinhu zvinokuvaraidza kuchiita sekunonakidza, kunogona kukuendesa kure naJehovha. Izvozvo ndizvo zvakaitika kune imwe hanzvadzi ine makore 20 inonzi Kim. “Hapana kupati kwandaisaenda,” anodaro. “Kupera kwevhiki kwega kwega, Chishanu, Mugovera uye Svondo aingova mapati. Asi iye zvino ndava kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinokosha zvokuita. Somuenzaniso, sapiyona ndinomuka na6:00 mangwanani kuti ndiende kuushumiri, saka hazviiti kuti ndinge ndichitandara kusvika kuma1:00 kana kuma2:00 dzousiku. Ndinoziva kuti kuwadzana nevamwe hakuna kuipa, asi kunogona kutitadzisa kuita zvinokosha. Kungofanana nezvimwe zvose, hatifaniri kunyanyisa.”
15. Vabereki vangabatsira sei vana vavo kuti vave nezvinovaraidza zvinonyatsozorodza?
15 Vabereki vane basa rokuriritira mhuri, kuitarisira pakunamata uye kuita kuti ifare. Izvi zvinosanganisira kuva nenguva yokumbofaranuka. Kana uri mubereki usava munhu akanyanya kuoma uchiona sokuti kufara kwose kwakaipa. Asi unofanira kungwarirawo zvinhu zvinogona kukanganisa mhuri yako. (1 VaK. 5:6) Kana ukanyatsofunga, unogona kuwana zvinhu zvinovaraidza uye zvinonyatsozorodza mhuri yako. * Kana iwe nevana vako mukadaro, munenge masarudza nzira ichakuswededzai pedyo naJehovha.
16, 17. Vabereki vakawanda vakasangana nemamiriro ezvinhu anorwadza akaita sei, uye tinoziva sei kuti Jehovha anonzwisisa kurwadziwa kwavo?
16 Rudo rwomubereki nemwana rwakasimba chaizvo zvokuti Jehovha akarushandisa kuenzanisira madiro aanoita vanhu vake. (Isa. 49:15) Saka hazvishamisi kuti munhu anogona kurwadziwa chaizvo wemumhuri paanosiya Jehovha. “Ndakarwadziwa chaizvo,” yakadaro imwe hanzvadzi ine mwanasikana ainge adzingwa. “Zvakandinetsa kuti, ‘Nei asiya Jehovha?’ Ndaizvipa mhosva uye ndaizvitongesa.”
17 Jehovha anonzwisisa kurwadziwa kwaunoita. Iye “akarwadziwa mumwoyo make” pakapanduka munhu wokutanga wemhuri yake yepanyika uye pakapanduka vakawanda vakararama Mafashamo asati auya. (Gen. 6:5, 6) Vaya vasina hama yomumba yakadzingwa vangasanzwisisa kurwadza kwazvinoita. Asi hakusi kuchenjera kurega mararamiro emunhu womumba akadzingwa achikuendesa kure naJehovha. Saka ungaita sei kuti usanyanya kurwadziwa kana mumwe wemumhuri akasiya Jehovha?
18. Nei vabereki vasingafaniri kuzvipa mhosva kana mwana akasiya Jehovha?
18 Usazvipa mhosva yezvakaitika. Jehovha akapa vanhu rusununguko rwokusarudza uye mumwe nomumwe wemumhuri akazvitsaurira uye akabhabhatidzwa anofanira ‘kutakura mutoro wake.’ (VaG. 6:5) Jehovha achatonga mutadzi nokuda kwezvaakasarudza kwete iwewe. (Ezek. 18:20) Uyewo usapa vamwe mhosva. Remekedza urongwa hwaJehovha hwokuranga mutadzi. Rwisana naDhiyabhorosi kwete vafudzi vanenge vachidzivirira ungano.—1 Pet. 5:8, 9.
Hapana chakaipa nokutarisira kuti munhu waunoda achadzoka kuna Jehovha
19, 20. (a) Vabereki vane vana vakadzingwa vangaitei kuti vasanyanya kurwadziwa? (b) Vabereki vakadaro vangava netarisiro yei?
19 Kana ukagumbukira Jehovha, unenge wasarudza kufamba munzira inokuendesa kure naye. Chokwadi, hama yako iyoyo yaunoda inofanira kuona kuti unokoshesa ukama hwako naJehovha kupfuura ukama hwako naye. Saka kuti utsungirire, ramba wakasimba pakunamata. Usazviparadzanise nehama dzako nehanzvadzi dzechiKristu dzakatendeka. (Zvir. 18:1) Udza Jehovha zviri kutsi kwemwoyo wako uchinyengetera. (Pis. 62:7, 8) Usatsvake tuzvikonzero twokuti uwadzane newemumhuri akadzingwa zvimwe muchifonerana kana muchinyorerana tsamba paIndaneti. (1 VaK. 5:11) Iva nezvakawanda zvokuita mubasa raJehovha. (1 VaK. 15:58) Hanzvadzi yambotaurwa inoti, “Ndinoziva kuti ndinofanira kubatikana mubasa raJehovha uye kuramba ndakasimba pakunamata kuti ndizokwanisa kubatsira mwanasikana wangu paachadzoka kuna Jehovha.”
20 Bhaibheri rinoti rudo “rune tariro pazvinhu zvose.” (1 VaK. 13:4, 7) Hapana chakaipa nokutarisira kuti hama yako ichadzoka. Gore negore vatadzi vakawanda vanopfidza uye vanodzoka kusangano raJehovha. Jehovha haarambi akavagumbukira pavanopfidza. Asi “akagadzirira kukanganwira.”—Pis. 86:5.
21, 22. Watsunga kuitei panyaya yokushandisa rusununguko rwokusarudza?
21 Jehovha akapa vanhu rusununguko rwokusarudza. (Verenga Dheuteronomio 30:19, 20.) Asi kunyange vaine rusununguko irworwo, vanofanira kusarudza noungwaru. MuKristu oga oga anofanira kuzvibvunza kuti: ‘Ndiri munzira ipi? Ndakabvumira basa, zvinondivaraidza uye zvinondizorodza kana kuti ukama nevemumhuri, kundiendesa kure naJehovha here?’
22 Jehovha anoramba achida vanhu vake. Tisu tingatoenda kure naye nokusarudza nzira isiriyo. (VaR. 8:38, 39) Asi izvozvo hazvifaniri kumboitika! Tsunga kusabvumira chero chii zvacho kukuendesa kure naJehovha. Nyaya inotevera ichakurukura zvimwe zvinhu zvina zvatisingatombofaniri kurega zvichitiendesa kure naJehovha.
^ ndima 10 Chitsauko 38 chebhuku raMibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2, chine zvimwe zvine chokuita nokusarudza basa.
^ ndima 15 Pamapeji 17-19 eAwake! yaNovember 2011 pane mamwe mazano aripo.